सहायता र अकसर गरेए प्रश्न - loveofqueen
घर / सहायता र अकसर गरे
म एक आदेश कसरी राख्छु?
एक पटक तपाईंको बागमा तपाईंको इच्छित वस्तुहरू एकपटक, बस 'चेक आउट' बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो खातामा साइन इन गर्न वा खाता सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नेछ। अर्को, आफ्नो रोजाई शिपिंग विधि छान्नुहोस् र कुनै पनि डिस्काउंट कोडहरू वा क्रेडिट वाउचरहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाई प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। अन्तमा, तपाईंलाई भुक्तानी पूरा गर्न निर्देशित गरिनेछ। एक पुष्टिकरण ईमेल तपाईंको दर्ता गरिएको ईमेल ठेगानामा पठाईनेछ जुन तपाईंको अर्डरको सामग्री समावेश छ!
मैले एउटा अर्डर राखेको छु। मेरो पुष्टिकरण ईमेल कहाँ छ?
कृपया तपाईंको पुष्टिकरण इमेलको लागि तपाईंको दर्ता ई-मेल इनबक्समा प्राप्त गर्न 24 घण्टा सम्म अनुमति दिनुहोस्। हामी तपाईंको Junk / Spam मेल फोल्डरको जाँच गर्न पनि सुझाव दिन्छौं। यदि तपाईं यस समय फ्रेम भित्र एक पुष्टिकरण इमेल प्राप्त गर्नुहुन्न भने, हामीलाई हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्।
यदि तपाईंको चेक प्रक्रियामा त्रुटि सन्देश राख्छ भने, क्रेडिट कार्ड समस्या छैन भन्दा बढी, वा तपाईंले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको बिलिङ वा पठाउने ठेगाना सहितको दोष। यस त्रुटिलाई ठीक पार्न, नाम र ठेगाना पुन: ढाँचा प्रयास गर्नुहोस् तपाईंको बिलिंग वा ढुवानी जानकारी। यदि त्रुटि सन्देश पुन: सम्भव छ भने, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस्।
के तपाईंले भर्खरै राख्नुभएको आदेश प्राप्त गर्नुभयो?
Loveofqueen.com मा तपाईंको अर्डर राख्नु भएपछि, एक पुष्टिकरण ईमेल तपाईंको प्रक्रिया पछि एक पटक तपाईंको इमेल ठेगानामा पठाइनेछ। यदि तपाइँ एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्न वा तपाईंको अर्डर पृष्ठमा तपाईंको अर्डर देखिने छैन, कृपया हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्।
के मैले बस राखेको क्रममा परिवर्तनहरू रद्द गर्न / रद्द गर्न सक्छु?
3 भित्र यसलाई तपाईंको राख्नको लागि परिवर्तन गर्न मात्र सम्भव छ र यो आदेश प्रशोधन गरिएको छैन। हामी अर्डरहरू छिटो छिटो प्रशोधन गर्छौं, त्यसैले परिवर्तनहरू र रद्दिकरणहरू सधैं पूरा हुन सक्दैन। तपाईले तुरुन्तै हामीलाई ईमेलमा समावेश गरेको परिवर्तन / रद्द अनुरोध विवरणको साथ लेख्नु पर्छ। यसले परिवर्तन गरेको कारणले तपाईंको अर्डरसँग प्रसोधन प्रक्रिया ढिलो गर्नेछ।
मेरो बिलिङ ठेगाना कसरी अद्यावधिक गर्न सक्छु?
तपाईंको बिलिङ ठेगानालाई तपाईंको खातामा लगेर र माथिल्लो दाँया कुनामा 'मेरो खाता' ट्याब चयन गरेर यो तपाइँको सम्भावना छ। 'विवरण' ट्याबमा जानुहोस् जहाँ तपाइँ त्यसपछि तपाईले मैन्युअल रूपमा आवश्यक रूपमा बिलिङ ठेगाना अद्यावधिक गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंको बिलिङ ठेगाना परिवर्तन गर्न तपाईको शिपिंग ठेगाना अद्यावधिक गर्दैन। सबै ढुवानी ठेगाना परिवर्तनले हाम्रो शिपिंग ठेगानामा परिवर्तनहरू ईमेल गरेर राखिएको आदेशको 1 घण्ट भित्र बनाइनेछ जुन तपाईंको अर्डर पठाईएको छैन मात्र।
के तपाईको आकार चार्ट छ?
हाम्रा लुगाहरू सबै आकारको आकारको रूपमा मानक US आकार तालिकासँग मेल खान्छ साइज आकारसही आकार को चयन गर्न को लागि, तपाईं त्यहि सामाग्री संग पहन सकते कपडे को टुकडे को माप सकते हो। उदाहरणको लागि, यदि लुगा लोचदार सामग्रीबाट बनाइन्छ भने, तपाईं लचीला सामग्रीसँग कपडाको टुक्रालाई मापदण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग आकारको बारेमा विशिष्ट प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस्।
यो मेरो कार्ड दुई पटक चार्ज गरिएको जस्तो लाग्छ। किन?
तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ एक प्राधिकरण हो। यो पर्याप्त धनराशि र खाता प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्न क्रेडिट कार्ड लेनदेन को लागी एक साधारण बैंक अभ्यास हो। यो प्राधिकरण स्पष्ट हुनेछ र तपाईंले राख्नु भएको आदेशको लागि एक शुल्क देख्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंको बैंक प्राधिकरण हटाउन 48 घण्टा लाग्न सक्छ। यदि तपाइँलाई प्रशोधन गर्न मद्दत पुर्याउनुहुन्छ भने तपाइँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड जारी जारी बैंकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
के म चार्ज नगरी मेरो अर्डर रद्द गर्न सक्छु?
पठाउनु अघि रद्द गरिएका सबै अर्डरहरू तपाइँको क्रेडिट कार्डमा फिर्ता गरिने छ। दुर्भाग्यवश, हामी पहिले नै पठाइएको आदेश पछि एक रद्द रद्द गर्न सक्षम छैनौं।
मलाई किन खाता बनाउनु पर्छ?
केवल तपाईंको खातामा साईन ईन गर्नुहोस् र "मेरो अर्डर स्थिति हेर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्। यसो गर्दा, तपाइँ आफ्नो अर्डरको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् जब तपाईंको प्याकेज पठाइएको छ।
मेरो अर्डर कहाँ छ? मैले अझै प्राप्त गरेको छैन?
तपाईंको अर्डर पठाइएको छ जब तपाइँले ट्र्याकिङ जानकारी समावेश गर्नुहुनेछ एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले ढुवानी पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया तपाईंको जुनङ्क मेल वा स्प्याम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्, जस्तै कि त्यहाँ त्यहाँ प्राप्त भएको हुन सक्छ।
के हुन्छ यदि म रुचि छ भने मेरो आकारमा बेच्न सकिन्छ?
तपाईं प्राय: हाम्रो भण्डारमा ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यदि एक वस्तुले राम्रो बिक्री गर्छ, हामी थप आकार थप गर्न सक्दछौं।
म एक पुनर्विक्रेता हुँ, म तपाईंको वस्तुको धेरै टुक्रा किन्न चाहन्छु, थोक मूल्य के हो?
नमस्ते, आफ्नो जांच को लागि धन्यवाद, तपाईं ठूलो मात्रा किन्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया इमेल हामीलाई, पठाउन हामी तपाईंलाई सबै भन्दा राम्रो मूल्य दिन हुनेछ, धन्यवाद!
तपाई मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ?
सबै इमेलहरू 1 व्यापारिक दिन भित्र जवाफ दिइनेछ। यदि तपाईंले हाम्रो जवाफ प्राप्त गर्नुभएन भने, कृपया तपाईंको इमेल पुनःप्राप्त गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडै जवाफ दिनेछौं।